Ihu Igwe Nobel na 2021: ihe niile ịchọrọ ịma | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 07/10/2021 14:26 | Ciencia
Ịmụ ihu igwe na -agụnye oke mgbagwoju anya na nnukwu ọrụ. N'ihi ya, ihe Ihe nrite Nobel maka ihu igwe 2021 nye ndị ọkà mmụta sayensị atọ ọmụmụ ha na physics na ihu igwe emebiwo eserese. Ndị meriri nrite Nobel bụ Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, na Giorgio Parisi. Ndị ọkà mmụta sayensị atọ a jisiri ike kọwaa otu ihe dị mgbagwoju anya nke a ga -aghọta na sayensị.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Nrite Nobel maka ihu igwe nke 2021 na mkpa ya.
1 Ihe nrite Nobel maka ihu igwe 2021
2 Usoro mgbagwoju anya
3 Mkpa ihe nrite Nobel maka 2021 maka ihu igwe
Ihe nrite Nobel maka ihu igwe 2021
Ọdịdị ahụ dị oke mgbagwoju anya nke na a na -akpọ ya sistemụ anụ ahụ dị mgbagwoju anya. Aha ya na -egosi ihe isi ike nghọta ya. Mmetụta ndị ahụ nwere ike ịdị site na akpịrịkpa atọm ruo na mbara ụwa ma metụta ma omume elektrọnị nkịtị na ihu igwe nke ụwa niile. N'ihi ya mkpa ya.
Na Tuesday, ụlọ akwụkwọ Swedish nyere ya onyinye maka nyocha na mmetụta ya na okpomoku zuru ụwa ọnụ, wee nye ya onyinye nrite Nobel a ma ama na physics. Ndị ọkà mmụta sayensị atọ, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann na Giorgio Parisi, ndị ọsụ ụzọ na nyocha sistemụ dị mgbagwoju anya na ndị ọkachamara ndị ọzọ na mmetụta ihu igwe, ka ekwuputara dị ka ndị mmeri nke mbipụta 2021.
Onye odeakwụkwọ nke Academy of Sciences nke Sweden, Göran Hansson, mebiri akụkọ ahụ, na -ekwupụta na onyinye enyere ndị nyocha a bụ maka ntinye aka ọhụrụ ha na nghọta anyị banyere sistemụ anụ ahụ dị mgbagwoju anya. A ga -enye ihe nrite ahụ, yana onyinye ahụike, kemịkalụ na akwụkwọ ọgụgụ ekwuputara n'izu a, na mmemme inye onyinye na Stockholm na Disemba 8.
Dabere na Swedish Academy, Giorgio Parisi dị afọ 73 meriri na nturu ugo pụrụ iche maka ịchọpụta "usoro zoro ezo na ihe dị mgbagwoju anya na nke adịghị mma." Nchọpụta ya bụ otu n'ime ihe ndị kacha mkpa nye echiche nke sistemụ dị mgbagwoju anya.
Syukuro Manabe si Japan na Klaus Hasselmann si Germany meriri nturu ugo maka onyinye ha "dị mkpa" maka ịkpụzi ihu igwe. Manabe, onye dị afọ iri itoolu, na -egosi ka ịba ụba ikuku carbon dioxide n'ime ikuku na -eme ka okpomọkụ nke elu ala bilie. Ọrụ a tọrọ ntọala maka imepụta ụdị ihu igwe ugbu a. N'otu ụzọ ahụ, Klauss Hasselmann, 89, rụrụ ọrụ ọsụ ụzọ n'ịmepụta ihe atụ nke jikọtara meteorology na ihu igwe.
Usoro mgbagwoju anya
Sistemụ dị mgbagwoju anya na atomiki na akpịrịkpa ụwa nwere ike ịkekọrịta ụfọdụ njirimara, dị ka ọgba aghara na ọgba aghara, na omume yiri ka ọ na -achịkwa ohere.
Parisi nyere onyinye mbụ ya na nyocha ya na physics site n'ịtụle ngwakọta ọla a na -akpọ iko.ma ọ bụ na -atụgharị, nke a na -agwakọta atọm ígwè n'ime oghere ọla kọpa. Ọ bụ ezie na e nwere nanị atọm ígwè, ha na -agbanwe ihe ndọta nke ihe ahụ n'ụzọ na -akpali akpali na nke na -enye nsogbu.
Parisi, onye dị afọ 73, chọpụtara na iwu zoro ezo na-emetụta omume yiri ka ọ bụ enweghị isi nke ihe siri ike wee chọta ụzọ iji kọwaa ya na mgbakọ na mwepụ. Ọrụ ya na -emetụta ọ bụghị naanị na physics, kamakwa na ngalaba dị iche iche dịka mgbakọ na mwepụ, bayoloji, neuroscience, na mmụta igwe (ọgụgụ isi).
Kọmitii ahụ kwuru na nchọpụta sayensị ahụ "Mee ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta ma kọwaa ọtụtụ ihe na ihe ịtụnanya dị iche iche na o doro anya.". Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Sweden na -ahụzi iko na -agbagharị agbagharị dị ka ngosipụta nke omume ihu igwe dị mgbagwoju anya na nyocha nke Manab na Hasselmann mere ọtụtụ afọ ka e mesịrị. Ọ na-esikwa ike ibu amụma ogologo oge nke usoro anụ ahụ dị mgbagwoju anya, dị ka ihu igwe nke ụwa anyị.
Manabe, onye na -arụ ọrụ na Mahadum Princeton dị na United States, duziri mmepe nke ụdị ihu igwe na 1960, na -eduga na nkwubi okwu na ikuku carbon dioxide na -eme ka ụwa dị ọkụ. N'ihi usoro ya na -adịghị mma, A na -ewere ihu igwe nke ụwa anyị dị ka usoro anụ ahụ dị mgbagwoju anya. N'otu aka ahụ, Hasselman jiri nyocha ya zaa ajụjụ ihe kpatara ụdị ihu igwe nwere ike bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, n'agbanyeghị na ihu igwe na -agbanwe agbanwe na ọgba aghara.
Ụdị kọmpụta ndị a nwere ike ibu amụma etu ụwa ga -esi meghachi omume na anwuru ikuku gas dị mkpa maka nghọta anyị gbasara okpomoku zuru ụwa ọnụ.
Dị ka Prọfesọ Mahadum Yale John Wettlaufer kọwara, onye ọka mmụta Italiantali 'na -ewu site n'ọgba aghara na mgbanwe nke sistemụ dị mgbagwoju na obere ọkwa', na ọrụ Syukuro Manabe na -arụtụ aka 'nweta akụkụ nke otu usoro. Chịkọtanụ ha ka ha buru amụma akparamagwa nke sistemụ anụ ahụ dị mgbagwoju anya. ”“ Ọ bụ ezie na ha na -ekesa ihe nrite n'etiti akụkụ ihu igwe na akụkụ nsogbu, n'ezie ha nwere njikọ, ”ka ọ kọwara.
Mkpa ihe nrite Nobel maka 2021 maka ihu igwe
Otu nkwubi okwu mkpebi a hapụrụ, ọkachasị na ntuli aka Manabe na Hasselman, bụ ịdọrọ uche ndị mmadụ gaa na nsogbu ihu igwe.
Dabere na Wettlaufer, site na nturu ugo a, Kọmitii Nobel tụpụtara "ịdị n'otu dị n'etiti ọmụmụ maka ihu igwe ụwa (site na milimita ruo nha ụwa) na ọrụ Giorgio Parisi." Dọkịnta Martin Juckes, onye isi nyocha na sayensị ikuku Onye ahụ na osote onye ntụzi nke British Center for Environmental Data Analysis (CEDA) kwuru na ịhụ ndị sayensi nwetara ihe nrite Nobel na Physics maka ọrụ ha na ihu igwe bụ "ozi ọma".
"Mgbagwoju anya nke usoro ihu igwe, yana ihe egwu nke nsogbu ihu igwe, na -aga n'ihu na -agbagha ndị ọkà mmụta sayensị ihu igwe taa," o kwuru.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nsogbu ihu igwe anyị na -eche ihu na narị afọ a na -eme ka ndị sayensị tinye ọnọdụ mepere emepe ma ọ bụ nwee ike ịchọta ụzọ ga -ekwe omume. Mgbanwe ihu igwe na -eyi egwu ịgbanwe ụwa anyị maara na ọtụtụ sistemụ akụ na ụba anyị chọrọ nkwụsi ike anyị nwere na ihu igwe taa.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara mkpa Nrite Nobel maka ihu igwe 2021 yana kedu njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihu Igwe Nobel na 2021